Hiran State - News: Dhawr wafti oo ka kala socda TFGda ayna kala hogaaminayaan C/wali Gaas,Shariif Hasan iyo shaqsiyaad ka socda Shiikh Shariif oo xarunta QM wada gaaray. maxey tahay sababta?
Dhawr wafti oo ka kala socda TFGda ayna kala hogaaminayaan C/wali Gaas,Shariif Hasan iyo shaqsiyaad ka socda Shiikh Shariif oo xarunta QM wada gaaray. maxey tahay sababta?
Dhawr wafti oo ka kala socda TFGda ayna kala hogaaminayaan C/wali Gaas,Shariif Hasan iyo shaqiyaad ka socda Shiikh Shariif oo xarunta QM wada gaaray iyagoo midba midka kale eeki karin. maxadse kala socotaa qaabkii uu malaayiin dolar ku siiyey C/wali Gaas maamulka Puntland markii uu dhawaantan booqasho ku tagay degaanadaasi?
Xarunta weyn ee QM midoobay waxaa ka dhaca sanad kasta shir ay iskugu yimaadaan madaxda aduunka waana shir joogto ah oo sanad leh. dowlado badan ayaa aad ula yaabay in mudo 3 sano gudahood ay shirarkaasi ka soo qeyb galaan hogaamiyaal cusub amaba si kale hadaan u dhigno wajiyo cusub iyadoo shirkan kii ka horeeyey uu ka qeyb galay Farmaajo midkii ka sii horeeyeyna ay ka qeyb galeen wafti uu hogaaminayey Cumar C/rashiid hadane C/wali Gaas.
Hadaba shirka hada ka socda QM oo ay isku arkayaan si horu dhac ah masuuliyiin kala duwan waxaa Somaliya uga qeyb galaya amaba ku wada sugan 3 wafti oo midkasta uu wato ajande u gaar ah. waxuuna wafti kasta isku mashquulinayaa sidii uu qurba joogta ku nool Canada iyo USA uga dhaadhicn lahaa hadafkiisa siyaasadeed bal aanu dul marno halka ay waftigaasi wax u marayaan.
1- Waftiga hore waxaa hogaaminaya C/wali Gaaas oo magaalada Mogdisho uga soo baxay si deg deg ah iyadoo sida wararka inagu soo gaarayaan la sheegayo in xitaa diyaarada uu magaalada Mogdisho ka soo raacay ay kiradeeda bixiyeen rag laga xusi karo Farmaajo si uu C/wali u yimaado shirka QM ka dhacaya ka hor inta uusan Shariifka safarkaasi soo aadin. ujeedada kale waxey aheyd ee uu safarkaasi deg dega ah u soo aaday R/wasaarahii sida qaldan ku yimid C/wali Gaas sidii uu uga qeyb gali lahaa shir mudo laga soo shaqeynahay oo ay si gaar ah iskugu yimaadeen beesha Daarood oo looga hadlayey xiliga kala guurka ah iyo sidii ay beeshu u midoobi laheyd uguna faa'ideysan laheyd isbedelada siyaasadeed ee dalka ka curtay, iyadoo uu shirkaasi ka dhacay magaalada Buffalo.
C/wali Gaas ayaa lagu soo waramayaa inuu dhaqaalo kor u dhaafayo amaba lagu qiyaasay 4 ilaa 5 million dolar uu u gacan galiyey dowlad goboleedka Puntland markii uu degaanadaasi ku tagay safar dhawaantan arintaan oo aysan ka war qabin masuuliyiinta bank dhexe.
Sidoo kale waxuu maamulka Puntland u saxiixay mashaariic lagu hormarin karay ilaa 6 gobol oo Somaliyeed isagoo hay'adaha Qaramada midoobay intooda badan kula taliyey iney ka howl galaan Puntland ayaa dhinaca kale marka la eego waxey isfahmi waa kala dhaxeeyaa Shiikh Shariif oo isagu shacabkii uu kaka hor tagi lahaa maamulka Puntland sida bulshada Hiiraan ku nool mar hore la dagaalay ayaa hada u muuqda mid xiliga kala guurka ah waxii la doono laga sameysanayo.
C/wali Gaas iyo maamulka Puntland waxey heshiis ku yahiin in la kala ilaaliyo Shariifka iyo shacabka ka soo jeeda koofurta halkaasina aysan wax nidaam ah ka dhalan sidaana u handadaan markasta TFGda iyagoo ku andacoonaya iney yahiin maamulka kaliya ee jira. dib uguma laabaneyno siyaasada qalafsan ee Shariifka lakinse C/wali iyo Farmaajo waxey qurbaha ka wadaan abaabul lagu fashilinayo siyaasada labada Shariif siiba Shiikh Shariif iyadoo waliba siweyn dhulka loogu jiidi doono hadii Puntland ka dhaco shirka wadatashiga ee ay hada beesha Daarood sidii ay ka yeeli laheyd mustyaqbalkiisa iska wareysanayaan marka lagu qabto Garoowe.
Waxey u muuqaal egtahay in Faroole Somaliya madaxweyne ka yahay C/walina kuxigeenkiisa yahay. sidoo kale Amb Mahiga ayaa isagane lagu casuumay shirar siyaasadeysan oo uu dhawaantan ku imaan doono Canada iyo Magaalooyin ay ka mid tahay Minneapols iyadoo ay hagayaan shaqsiyaad intooda badan goob joog ka ahaa shirkii Bufallo oo ay isku wareysanayeen mid ka mid ah beelaha Soamliyeed oo lagu casuumay C/wali Gaas.
Ujeedada Mahiga laga leeyahay waa in shirka Garoowe lagu dhimaa tirada Baarlamaanka iyadoo la yiri waxuu Mahiga aruurinayaa fikirka qurba joogta Somaliyeed laakinse tiro yar ayaa loo ogolaanayaan iney ka soo qeyb galaan shirarka Mahiga lagu casuumay ee ka dhici doona Canada iyo USA.
Sida muuqata tuhun weyn iyo siyaasado qalafsan ayaa ka soo socda hadii shirka wajigiisa labaad ka dhaco Garoowe. Garoowe waa magaalo Somaliyeed kuna haboon in shir Somaliyeed lagu qabto laakisne sida hada loo weeciyey wajigii labaad ee shirka ma noqon doono amaba uma muuqaal eka shir ay wax badan ka soo bixi doonaan. nasiib wanaag si shirkii Buffalo ee sida gooynida ah loogu casuumay C/wali Gaas ee ay iskugu yimaadeen beesha Daarood loo daboolo waxaa Somalida la tusiyey oo kaliya sawiradii laga soo qaaday waftigii uu hogaaminayey oo la yiri waxaa loo sameyey casho sharaf
2- Kooxdaan waxaa hogaaminaya Shariif Hasan oo isagu Mogdisho uga soo baxay labo arimood, waa mida horee inuu soo booqdo caruurtiisa ah oo Mareykanka ka joogta iyo inuu shirkaan QM ka dhacayo u noqodo midkii ugu danbeeyey ee uu ku yimaado Mareykanka isagoo wafti hogaaminya maadama dalka laga dhisayo dowlad rasmi ah isaga iyo Shiikh Shariifna u muuqdaan kuwo daaqada ka baxayo sida warar xaqiiqda u dhaw lagu helayo inuu ugu yaraan dhismaha QM isku sawiro si ay xusuus ugu noqoto una ogaado siyaasada C/wali iyo Mahiga ay ka ababulayan Mareykanka.
3-Kooxdaan waxey si gaar ah uga socdaan Shiikh Shariif mana aaminayaan waxkasta oo ay aduunyada u sheegaan C/wali iyo Shariif Hasan iskood ayey isku soo abaabuleen maalmaha soo socda ayeyna magaalada Washington dhaqdhaqaq lidi ku ah C/wali ka bilaabi doonaan maadama xaalka C/wali iyo Shariifka uu hada aheyn sidii hore.
Filo dhawaantan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee iska soo horjeeda ee ay hada qurbaha ka wadaan TFGda.hadaba shirarka uu jaaliyada waqooyiga America kula kulmi doono Mahiga waxaanu ka soo diyaarin doonaa war bixino si aanu bulshada Somaliyeed iyo aduunyadaba u tusino in siyaasada Mahiga ay u janjeerto hal dhinac , shirarka qaarkood tiro yar ayaa lagu casuumayaa kedibna waxaa la doonayaa in qoral ay soo diyaariyeen tirada soo casuuntay ay qoreen iyagoo ku hadlayo magaca jaaliyada Somaliyeed aragtidooda iney Mahiga u dhiibaan kedibna shirka Garoowe sidaasi uu ula tago isagoo qoraalkaasi ka wata qurba joogta.
Marka dhinaca kale laga eego Shiikh Shariif isaguba ma shar yara wasiiradii xukumada C/wali ayuu isku habeystay una sheegay in C/wali ka tashadaan howshoodana xarunta Villada ku wataan madama uu sameeyey qiyaano qaran sida uu Shariifka aaminsan yahay oo uu C/wali Malaayiin dolar Puntalnd u gacan galiyey iyadoo la heli karay in shacabka Somaliyeed si siman loogu qeybiyo oo kuwii heshis u baahana lagu dhax dhaxaadiyo kuwii Shabaab iska xoreynayana laga saacido mana jirto dhaqaalahaas baarlaman laga ansaxiyey waayo maba jirto sharci lagu dhaqmo oo kala xadidayo hay'yaddaha dowlada maadama ninkasta aaminsan yahay in xiliga kumeel gaarka uusan jirin xisaabtan iyo kala danbeyn.
Wararkii ugu danbeeyey waxey shegayaan in tirada baarlamaanka laga dhigayo 185 mudane oo kaliya. dad badan waxaa laga yaabaa iney isweydiinayaan yaa awooda in la dhimo tirada baarlamanka iska leh iyo wax la mid ah.laakinse isma weydiinayaan yaa baarlamanka gaarsiiyey 550 marka in ninkii ka dhagay shaleyto 550 uu maanta go,aankan qaadan karo ma filayaan.
Marka tirada baarlamanka la dhimo xubnaha noqon doona mudaneyaal baarlamaan waxaa loo furayaa siminaar si aysan ugu codeyn dad gaar ah oo ay u sinaadaan musharaxiinta doorashada u tartameysa kedibna mark aay doortaan afhayeen iyomadaxweyne maalinta ku xigta waa la kala dirayaa waayo xiligii kumeel gaarka waa laga baxay oo wadankii waxuu galay amaba waxaa mudadaasika dhalan doona dowlad rasmi ah oo waliba ay dad badan la yaabi doonaan awoodeeda, waayo hadalkeeda ayaa gees ka gees ka shaqeyn doono.
Mudanayaasha bedeli doona kuwa hada jira kuma iman doonaan saaxib ikudar iyoanigaa reerkeyga metelaya waxaa lag asoo dooran doona degaankiisa oo waxaa xulidooda iska gaashan dona maamulada markaasi jira iyo cuqaasha beelaha Somaliyeed.
La soco warbixinta shirarka soosocda ee Mahiga iyo qurba joogta
· admin on September 17 2011 12:03:18 · 0 Comments · 2080 Reads ·
14,612,981 unique visits